प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्ध बोल्नथाले, त्यसपछि बलिउडले फिल्म दिन छोड्यो| Nepal Pati
जब प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्ध बोल्न थाले, त्यसपछि बलिउडले फिल्म दिन छोड्योः प्रकाश राज
एजेन्सी । बलिउड र दक्षिण भारतीय फिल्ममा चर्चित अभिनेता प्रकाश राजले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध बोलेका कारण उनलाई फिल्ममा काम नमिलेको बताएका छन् ।
एक इन्टरभ्यूमा उनले भने, ‘जब मैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध बोल्न थाले त्यसबेला देखी बलीउडमा मलाई फिल्म मिलेको छैन ।’ प्रकाश राज केही समय पहिलेबाट नरेन्द्र मोदी सरकार र भाजपाको राजनीति प्रति कडा विरोध गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशले द प्रिंटसंग भने, ‘गएको वर्ष अक्टुबरमा पहिलो पटक मैले प्रधानमन्त्री मोदीका विरुद्ध बोलेको थिएँ र त्यही कुरालाई लिएर अहिले मलाई बलिउडले काम दिन छोडेको छ । साउथमा कोही समस्या छैन । तर वलिउडमा मलाई अफर आउँन छोडेको छ ।’ हुनत प्रकाशलाई यसको कुनै चिन्ता छैन । किनभने उनीसंग पैसाको कमी छैन ।
प्रधानमन्त्री मोदीमाथी प्रकाशका वक्ततव्य त्यसबेला चर्चामा आएको थियो, जब उनले लेखक गौरी लङकेशको हत्या भएपछि प्रधानमन्त्रीले नबोको कुरालाई उठाएका थिए । गएको वर्ष सेप्टेम्वरमा गौरी लङकेशको बैङ्ग्लोरमा उनकै घरको बाहिर केही अज्ञात समुहद्वारा हत्या भएको थियो । मार्चमा स्पेशल इन्भेस्टिगेशन टीमले यो मुद्दामा एक व्यक्तिालाई पक्राउ गरेको थियो । यो घटना पुरै देशभर चर्चामा थियो ।
लङ्केश र प्रकाशको मित्रता धेरै पुरानो थियो । उनको मृत्युलाई लिएर प्रकाशले भने, ‘गौरीको मृत्युले मलाई धेरै तनाब दियो । उनी प्रश्न सोधिरहेकी थिइन् । जब उनको हत्या भयो तब मलाई अपराधबोध भयो । के हामीले उनलाई लडाईमा एक्लै छोडेका थियौं ? म जति प्रश्न सोध्छु, त्यती नै मलाई धम्कि दिएर मेरो काम रोकेर कोशिश भइरहेको छ । र यो भाजपाले नै गरिरहेको छ ।
प्रकाश राजले भने, प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो बक्तव्यबाट देशमा आशाको किरण देखाएका थिए । तर अहिले सम्म् केही भएको छैन । भाजपाका नेता पुराना कुरा गर्छन् । नेहरूले के गरे ? टीपू सुल्तानले के गरे ?सनातन धर्मले के गरे ? म आफ्नो दुई पुस्ता पुराना हजुरबाको बालाई पनि चिन्दिन भने मलाई टीपू सुल्तानसंग केनै लिनुछर ?
प्रकाश राज यो समय कर्नाटक विधानसभा चुनावमा भाजपा विरुद्ध क्याम्पेन गरिरहेका छन् । कर्नाटकमा टीपू सुल्तानको मुद्दा धेरै चर्चामा छ । प्रकाश राज केही समय अघि अजय देवगनको फिल्म ‘गोलमाल अगेन’ मा देखिएका थिए यो भन्दा पहिला फिल्म ‘वान्टेड’, ‘सिंघम’, ‘दबंग २ ’, जस्ता फिल्ममा फरक फरक भूमिकामा देखिएका थिए ।